4:38 pm - Tuesday January 23, 2018
Home » Champions League » Wenger Oo Wax Laga Naxo Ku Tilmaamay Dhaawaca Ozil
Mar 12, 2014 206 Viewed	Aidarous Comments Off on Wenger Oo Wax Laga Naxo Ku Tilmaamay Dhaawaca Ozil
Tababaraha kooxda Arsenal , Arsene Wenger ayaa ku Naxdin iyo warwar weyn ka muujiyey dhaawaca Muruqa Bawdada ah ee Ciyaaryahan Ozil ku Khasbay inuu bedel dalbado kulankii kooxdiisa Iyo Munich ee Habeen hore.
Laacibkan qiimaha Sare ee £42 million ah ku soo gallay kooxda ka dhisan London , ayaa dhaawac muruqa bawdada ahi keenay in intii lagu jiray nasashada qaybtii hore ee ciyaarta lagu bedelo , Tomas Rosicky, kaas oo markii ay baadhitaan ku sameeyeen dhakhaatiirta khaaska ah ee kooxda Bayern iyo qaranka Germany ee kala ah Dr Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt sababay in Wenger ku yidhaahdo warfidiyaha Sky qaybtiisa Jarmalka , “Ozil Dhaawaca gaadhay waa mid Daran”.
“Ozil waxaa soo gaadhay dhaawac seedaha muruqa bawdada ah , oo dhaawac halis ah’’. Ayuu hadalkiisa sii raaciyey shirkii jaraa’id ee uu ciyaarta ka dib qabtay tababaraha Arsenal.
“Ma hubo mudada uu qaadan doono, laakiin waxaan xaqiijin karaa inuu seegayo kulanka Tottenham.”
“Waa inaan baadhitaan kale ku samaynaa si aan u ogaano inta uu leeg yahay dhaawacu , laakiin wuxuu kolay maqnaanayaa mudo todobaadyo ah.”
Markii laga saaray Ozil kooxda Gunners habeen hore, waxay la kulantay dhibtii goolka uu ka dhaliyey Bastian Schweinsteiger, kaas oo inkastuu bareejeeyey Lukas Podolski hadana keenay in kooxda London ka dhisan celcelis goolasha oo 3-1 ahi lagaga reebo horyaalka Champions League.
Filed in Champions League England Wararka Maanta